ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၇-၃-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၇-၃-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- ကြိုတင်ကြံစည်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ကြောင်း နမ်ဘီယား ပြော click
- ဘာသာရေးအကြမ်းဖက်မှု တိကျစွာ အရေးယူဖို့ ကုလ တောင်းဆို click
- အကြမ်းဖက်မှုတွေ အစွမ်းကုန် တားဆီးမယ်လို့ အစိုးရ ကြေညာ click
- ဆူပူမှုတွေ တားဆီးနိုင်အောင် ရန်ကုန်တိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ပါတီတွေနဲ့ ဆွေးနွေး click
- မြန်မာနိုင်ငံက အကြမ်းဖက် ပဋိပက္ခကို စိုးရိမ်ထိတ်လန့် click
- ဘာသာရေးပဋိပက္ခ ပျံ့နှံ့မှု အမေရိကန် စိုးရိမ် click
- နတ္တလင်းမှာ ဗလီ ၁ လုံးနဲ့ အိမ် ၅ လုံး ဖျက်စီးခံရ click
- ပဲခူးတိုင်း မြို့တချို့မှာ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ် click
- ပဲခူးတိုင်း အနောက်ခြမ်း မြို့တချို့ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ် click
- မိတ္ထီလာဆူပူမှု သေဆုံးသူ ၄၀ ရှိကြောင်း အစိုးရ ကြေညာ click
- မိထ္ထီလာ အခြေအနေ စိုးရိမ်နေရဆဲ (ရုပ်သံ) click
- မိတ္ထီလာအရေးအခင်း (တနင်္ဂနွေ စကားဝိုင်း) click
- မလက်တိုအရေး အကျိုးဆောင်တဲ့ ရွှေညဝါဆရာတော်ကို ဧရာဝတီတိုင်းအစိုးရ ဂုဏ်ပြု click
- ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာ ၈ စောင် ထုတ်ဝေခွင့်ပြု click
- ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာ ၈ စောင် ထပ်မံ ထုတ်ဝေခွင့်ပြု click
- ညောင်ရွှေ မြေယာသိမ်းကိစ္စနဲ့ မြေယာကော်မရှင် (ရုပ်သံ) click
- မန္တလေး ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ကျူးကျော်နေအိမ်အမှု (ရုပ်သံ) click
- မဲ့စရင်းစခန်း မီးဘေးဒုက္ခသည်တွေ UNHCR ဦးဆောင် ကူညီ click
- ပူတာအိုခရိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေး အသုံးစားရိတ် သတ်မှတ် click
- မြန်မာ့ဆန် ဂျပန်နိုင်ငံက ၀ယ်ယူမည် click
- Junction Square အပေါ်ထပ် စားသောက်တန်းက CP ဆိုင်မှာ မီးလောင် click
- ၆၈ နှစ်မြောက် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ / တပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနား မြင်ကွင်းအချို့ click
- ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမြန်မာမိသားစုတို့ မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး စုပေါင်းဆုတောင်းမည် click
- သက်ရှိနှင့် သက်မဲ့ click
- စားသုံးနေတဲ့ သစ်သီးဝလံတွေမှာ ဓာတုဆေး အဆိပ်အတောက်တွေ ကင်းစင်မှု ရှိရဲ့လား click
- အလုပ်မှာ မပျော်ဘူးလား click
- … ပြိုလဲပျက်စီးခြင်း (ဆောင်းပါး) click
- ရင်ကွဲပက်လက်ကဗျာ click
- တရုတ်၊ ဂျပန်နဲ့ အမေရိကတိုက် ကုန်သွယ်ရေး (ရုပ်သံ) click
- လိင်တူထိမ်းမြားမှု နိုင်ငံတော် တရားရုံးချုပ် ကြားနာ click
- ချယ်ရီပွဲ ကြိုနေတဲ့ ၀ါရှင်တန် (ရုပ်သံ) click
အင်း ..... သင်္ကြန်တောင် ကျတော.မယ် ၊ သင်မကျေနပ်
သူတစ်ဦး ရှိရင် .... ရေပက်တဲ. ........
ဖလား ထဲ အက်ဆစ်ထည်. ..... ပြီး ... မကျေနပ်
သူ ၇ဲ. မျက်နှာကိုပက် .... အဲ ....
စစ်လားဆေးလား လုပ်ရင် ... အက်ဆစ် မှန်း မသိ ပါဘူး
ေ၇ဘဲ ထင်တာ .. ပြော ၊ အပြစ်ကလွတ်ပြီ ။
ဒေါ်စုပြောသလို သံသယ ရဲ. အကျိုးကို လက်ပံတောင်း ရဲ တွေလို
သင်လည်း ခံစားခွင်. ရှိတယ် လေ ၊
ဥပဒေ ဆိုတာ လူတိုင်းအပေါ် တပြေးညီ သက်ရောက်
၇တယ် ဆိုလား ၊ ဘာ လားဘဲ ၊